ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကနဦး (ထောက်ကြန့်)တွင် နှစ်ထပ် Steel Structure သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၆ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကနဦး (ထောက်ကြန့်)တွင် ဖိုင်တွဲများ၊ သိမ်းဆည်းရန် အလျား ပေ ၃၀ ၊ အနံ ပေ ၅၀ ၊ အမြင့် ၂၄ ပေ၊ မီးဆေး အပါအ၀င် နှစ်ထပ် Steel Structure သံကူကွန်ကရစ...
Posted Date :06-Feb-2019
ချင်းပြည်နယ် ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက...
ချင်းပြည်နယ် ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ချင်းပြည်နယ် ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) ဒုတိယ ၁၂ လအတွင်း ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူ ထားသည်။တင်ဒါပုံစံများကို (၁၄.၂.၂၀၁၉) ရက်မှ (၂၁.၂.၂၀၁၉) ရက်အထိ နံနက် ၉...
Posted Date :14-Feb-2019
တောင်ကြီးမြို့တွင် ကုန်သည်လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း အပါအ၀င် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအချို့အတွက် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ တောင်ကြီးမြို့နှင့် တာချီလိတ်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးဌာနများ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အပိုင်း (၂)တွင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ တောင်ကြီးမြို့တွင် ကုန်သည်လမ်...
Posted Date :26-Feb-2019
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနက နွားခြံဆောက်လုပ်ခြင်း...
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနက နွားခြံဆောက်လုပ်ခြင်း အပါအ၀င် ဆောက်လုပ်ငန်းရေး လုပ်ငန်းအချို့အတွက် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၅ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘတ်ဂျက် ပြည်ထောင်စုငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောက် လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ (က) ပေ (၈၀x၂၀) သစ်သားဖရိန် နွားခြံ (၂)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း...
Posted Date :28-Feb-2019
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ်လမ်းနှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းများတ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ်လမ်းနှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းများတွင် YGN Weekend Market ဖွင့်လှစ်ရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ်လမ်းနှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းများတွင် YGN Weekend Market ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရုံးတွင် (၂၄.၁.၂၀၁၉) ရက်မှစ၍ ရုံးချိန်အ တွင်း တင်ဒ...
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်းတံတားဌာနမှ အသု...
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်းတံတားဌာနမှ အသုံးပြုပြီးသည့် ကတ္တရာပုံးခွံ (၄၉၀၆) လုံးအား ရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၄ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်းတံတားဌာန၏ ၆၂ လမ်း သိုလှောင်ရုံ (၂၉၂၆) လုံးနှင့် တမာတောင် (၁၅ မိုင် ၅ ဖာလုံ) (၁၉၈၀) လုံးတွင်ရှိသော လမ်းလုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပြုပြီးသည့် ကတ္တရာပုံးခွံ (၄၉၀၆) လုံးအား လေလံတင်ရောင်းချ နိုင်ရေးအတွက် လေလံခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပါသဖြ...
Posted Date :21-Feb-2019
Expire Date :21-Feb-2019
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွ...
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒေသ (၈) မွန်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ မွန်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကမ်းပြိုက...
တံတားဦးစီးဌာနမှ အရည်အသွေးများ စမ်းသပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည...
တံတားဦးစီးဌာနမှ အရည်အသွေးများ စမ်းသပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း (၁၅)မျိုး ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း (စက်ပစ္စည်း) အသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် တံတားအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးရုံးများတွင် ကွန်ကရစ်၊ ဘိလပ်မြေ၊ သဲ၊ ကျောက်၊ သံချောင်းနှင့် မြေကြီးနမူနာ (Soil) များ၏ အရည်အသွေးများ စမ်းသပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့်...
Expire Date :11-Feb-2019
ပန်းတနော်မြစ်ကမ်းနား River View ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွ...
ပန်းတနော်မြစ်ကမ်းနား River View ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အပိုင်း (၂) (၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ပန်းတနော်မြစ်ကမ်းနား River View ပြုလုပ်ခြင်း (သီဟလမ်းမှ ဘုရင့်နောင်လမ်းကြား) (၁၉၂' x ၃၆') လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် တရ...
မောင်တောမြို့နယ် ခုံတိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ် (၂၇) အိမ်အား...
မောင်တောမြို့နယ် ခုံတိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ် (၂၇) အိမ်အား တည်ဆောက်ရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးလက်စံပြအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မောင်တောမြို့နယ် ခုံတိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ် (၂၇) အိမ်အား တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ခေါ်...
Expire Date :22-Feb-2019
တာမွေယာယီဈေး၊ မြေဧရိယာ ၃ ဒသမ ၇၉၂ ဧကတွင် အဆင့်မြင့် ဈေ...
တာမွေယာယီဈေး၊ မြေဧရိယာ ၃ ဒသမ ၇၉၂ ဧကတွင် အဆင့်မြင့် ဈေးအဆောက်အအုံ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် Design & Build တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကဆံလမ်းပေါ်၊ တာမွေယာယီဈေး၊ မြေဧရိယာ ၃ ဒသမ ၇၉၂ ဧကတွင် အဆင့်မြင့် ဈေးအဆောက်အအုံ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် Design & Build တင်ဒါလျှောက်လွှာ ခေါ်ယူထားသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တိုင်းဒေ...
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာ/ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လ...
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာ/ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်း (၉)ခုဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာ/ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ တိုက်နယ်ဆေးရုံဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီး နေအိမ်၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့် ဌာနခွဲစုစုပေါင်း ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်း (၉)ခုဆောက်လုပ်ခြင်း အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူ ထားသည်။ တင်ဒါပုံစံများ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်မှာ (၂၁.၁.၂၀၁...
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် (၂)ရပ်ကွက်ရှိ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအ...
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် (၂)ရပ်ကွက်ရှိ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် အမှတ် (၂) ဈေးမြေနေရာတွင် အဆင့်မြင့်ဈေးသစ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် အဆိုပြုတင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၈ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် (၂)ရပ်ကွက်ရှိ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် အမှတ် (၂) ဈေးမြေနေရာတွင် အဆင့်မြင့်ဈေးသစ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် အဆိုပြုတင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ အဆိုပါစည်ပင်သာယာရေးသည် အကွက်အမှတ် ၉/ကချင်စုအရှေ့၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၇၈/ခ)၊ မြေခ...
စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဇမ္မူသီရိမြို့နယ်တွင် သင်...
စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဇမ္မူသီရိမြို့နယ်တွင် သင်တန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၈ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စုငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဇမ္မူသီရိမြို့နယ်တွင် သင်တန်းကျောင်း (၁၈၅' x ၉၀' ၊ RC လေးထပ်၊ ယူပုံ) ဆောက်လုပ်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။...
Posted Date :31-Jan-2019
Expire Date :31-Jan-2019
အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၀...
အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၈ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ (က) အားကစားပစ္စည်းများ၊ ( ခ) စားရိပ်သာသုံးပစ္စည်းများ၊ ( ဂ) ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ (ဃ) အိပ်ရာသုံးပစ္စည်းများ၊ ( င) လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ( စ) ရုံးသုံးစက်...
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများအတွက်...
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများအတွက် စာရေးခုံများလုပ်ငန်းအပ်နှံဝယ်ယူနိုင်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၇ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုလမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများအတွက် စာရေးခုံများလုပ်ငန်းအပ်နှံဝယ်ယူနိုင်ရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူ ထားသည်။ (က) Single Desk & Chair -...
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတ...
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူ ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၈)ခု၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း (၄၃)ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ...
Expire Date :06-Feb-2019
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ ရေဝေကွန်ရက်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ ရေဝေကွန်ရက်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ (က) ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်၊ ၆၄ x ၆၅ လမ်းကြား၊ ဂေါ်သဇင်လမ်းနှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်းကြား၊ ( ခ...
Posted Date :13-Feb-2019
Expire Date :13-Feb-2019